किन काजोल र गोविन्दलाई एकसाथ फिल्ममा देख्न पाइएन के होला कारण ? – News Nepali Dainik
किन काजोल र गोविन्दलाई एकसाथ फिल्ममा देख्न पाइएन के होला कारण ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ ३०, २०७७ समय: ९:४४:५२
अभिनेत्री काजोलले गोविन्दसँग कुनै पनि फिल्ममा काम गरिनन्। आम पाठकहरुको लागि किनहोला भन्ने प्रश्न मनमा उठ्न सक्छ । यस्तै प्रश्नको सामना गरेपछि काजलले भारतीय मिडिया बलिउड लाइफका पाठकहरूको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै भनिन्, ‘हामीले जंगलि नामको फिल्म सुरु गरेका थियौं, जुन निर्देशक राहुल रावलेले बनाउनु पर्ने थियो ।
हामीले यस फिल्मको लागि फोटोशूट पनि गरेका थियौं तर यो सुरु हुनु अघि फिल्म रोकियो । हामीले फोटोशूट बाहेक फिल्मका लागि कुनै शुटिंग गरेका थिएनौं, तर म भन्न चाहन्छु गोविन्द (गोविन्द) एक अद्भुत अभिनेता हो ।
मैले सँधै भनेको छु कि मानिसहरूलाई हसाउन धेरै गाह्रो हुन्छ र गोविन्दले ती कार्यहरू राम्रो गर्दछन । काजोललाई भविष्यमा गोविन्दसँग काम गर्ने भनेर सोधिंदा उनले भनिन्, ‘मलाई भविष्यको बारेमा थाहा छैन तर गोविन्द अद्भुत अभिनेता हुन्।
काजोललाई भविष्यमा गोविन्दसँग काम गर्ने भनेर सोधिंदा उनले भनिन्, ‘मलाई भविष्यको बारेमा थाहा छैन तर गोविन्द अद्भुत अभिनेता हुन्। यदि राम्रो कुरा आयो भने हामी अवश्य काम गर्नेछौं ।’बलिउड अभिनेत्री काजोल नेटफ्लिक्समा रिलीज भएको उनको नयाँ फिल्म ‘त्रिभंगा’ लिएर दर्शकहरुमा आएकी छिन् ।
Last Updated on: February 12th, 2021 at 9:44 am